Nisy ny “ni… ni” izao indray atolotra anao ny “si… si” - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny mahatonga ahy androso ny “Si… si” dia ilay adihevitra momba ny fanafoanana ny zandary na zandaka na bodega (samy fiantso azy avokoa ireo).
Ny depiote Zafitsiandraofa Brunelle no isan’ny tena nivoy ny fanafoanana ny zandary hatrizay ary indrindra taorian’ny fidarohana an’i Jean-Pierre. Jean-Pierre dia ilay mpitarika ny girevin’ny mpianatra eny Ankatso farany teo. Na ida nisy aza karazana olon-kafa nivoy ny hevitra fanafoanana ny zandary dia ny azy no tena nalaza.
Namaly bontana kosa ny depiote Randrianasolo Nicolas. Izy dia fantatra amin’ny fombany mivantambantana fiteny iny. “Tsy mety izany fitenin’ny depiote Brunelle izany. Tsy filohan’ny vaomieran’ny fandriampahalemana izy ka haneho izany hevitra izany” hoy ny depiote Nicolas raha izy nitafa tamin’ny mpanao gazety ny alatsinainy 7 sepitambra teo. Taorian’ny diany tany Etazonia izany nandray anjara tamina fivoriana notontosaina teny anivon’ny Onu. Izy no nandeha tany satria izy dia filohan’ny vaomiera momba ny fandriampahalemana ao amin’ny Antenimieram-pirenena.
Raha tohizana ny fijerin’ny depiote Nicolas (araka ny nahitantsika azy teo ambony) dia milaza ve izy fa izy afaka maneho hevitra mikasika ny fanafoanana na tsia ny zandary ? Mazava loatra fa raha ity depiote ity dia tsy hanaiky velively ny fanafoanana ny zandary izy satria ny tenany da zandary amperinasa no voafidy ho depiote izao. Raha ny lalana no arahina dia miato aloha ny maha zandary azy mandritra ny fotoana hisahanany ny asa sy andraikitra maha depiote.
Raha hiverenana indray kosa ny hevitry ny depiote Brunelle dia fantatra fa efa ela izy no nilaza fa tokony ho foanana ny zandary satria rafitra mitory ny mahazanatany ny fisian’ny zandary. “Ireo firenena zanatany frantsay ihany no manana izany zandary izany” hoy ny depiote Brunelle. Izany hoe fijery politika no tena itondrany ny heviny fa tsy fijery tekinika loatra. Ny olana mandre ity depiote milaza izany heviny izany dia noho izy polisy. Moa ve noho izy polisy no angatahany ny fanafoanana ny zandary ? Resaka tombontsoa tsy itoviana ve ? Tsaroana koa fa lehiben’ny Paf (Police de l’air et des frontières) i Zafitsiandraofa Brunelle talohan’ny nahalany azy ho depiote izao. Niara-niasa tamin’ny zandary izy tao. Nisy ve nahita ny fahasarotan’ny fanatontosana ny asa nataon’ny Paf tamin’izany izy ? Tsy nilaza na nanazava ny momba izany ity depiote ity teo amin’ny haino aman-jery. Antso kosa no ampitaina aminy eto : “Arosoy ny tolo-dalana avy amin’ny depiote Brunelle ary aroson’i vondrona Mapar 1 ho dinihana eo anivon’ny Antenimieram-pirenena hahitana ny mahasoa ny firenena e”.
Amin’ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia fantatra fa hisy ny valandresaka hiarahan'ny minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria hataon’izy ireo ho an’ny mpanao gazety ny alakamisy 10 sepitambra. Azo antsaina avy hatrany fa tsy maintsy isan’ny fanontaniana hapetraky ny mpanao gazety amin’ireto manam-pahefana politika ireto ny momba ity fitakiana ny fanafoanana ny zandary ity. Marihina fa ny hevitra naroson’ireo mangataka ny fanafoanana ny zandary dia na miditra miaramila izy ireo na miditra polisy kosa fa tsy hoe very asa avy hatrany.
Misokatra ny adihevitra izay no mahatonga ilay “si… si” ao amin’ny lohateny : “Si… le corps de la gendarmerie est maintenu quels sont les avantages ?” “Si… le corps de la gendarmerie est dissout quelles sont les conséquences ?” Na hoe : raha toa ka tazomina ihany ny rafitra zandarimaria dia inona no fatiantoka na tombontsoa ? Soritana fa maro ireo vaovao ratsy re momba ny zandary tao ho ao. Teo ny fandraisan’ny zandary anjara tamin’ny fidarohana mpianatra teny ankatso dia io indray misy filazana fa tratra nivarotra (sa nampanofa ?) bala sy basy ny zandary roa lahy…
Mbola be ny lafin-kevitra azo ifanakalozana momba ity resaka zandary ity. Raha “si… si” no naroso mety azo avadika ho “ou… ou” izy ity ka lasa mampivovo olona matory eny fa na adika teny malagasy aza ilay izy dia ho lasa “na… na” dia mahatonga olona hihanahana mihitsy.
Soritana fa azo ampiana ny olana raha manam-potoana ho laninana amin’ny asa saina isika : nahoana raha ny miaramila no foanana dia atao zandary daholo ? Angaha isika hahatohitra raha misy hanafika antsika eto ? Moa ny fahavalontsika tsy isika samy isika ato anatin’ity Nosy ity ?
Ny mampalahelo amin’izao raharaha izao dia tsy azo antoka fa hitarika fandriampahalemana izao fifanakalozana izao hitondra fifandroritana fotsiny ihany. Ny dahalo hanjaka hatrany any amin’ny faritra iandraiketan’ny zandary, ny tontakely sy mpanao sintomahery ary ny hafa ho tompon-tanana amin’ny toerana iasan’ny polisy… O ry manam-pahefana ô, mba izay tena asanareo hatao fa aza mifanasa vangy e…